Indawo yogcino-mpepha izisombululo zokungenisa ubushushu
Yintoni induction yokunyanga inkqubo yomphezulu? Ukutshisa ubushushu yinkqubo yokunyanga ubushushu evumela ukufudumeza ekujolise kuko kakhulu kwesinyithi ngoqheliso lombane. Inkqubo ixhomekeke kwimisinga yombane eyenziwe ngaphakathi kwezinto ukuvelisa ubushushu kwaye yeyona ndlela ikhethwayo esetyenziselwa ukudibanisa, ukuqina okanye ukuthambisa isinyithi okanye ezinye izinto eziqhubayo. Kweli xesha… Funda ngokugqithisileyo
iindidi FAQ, Teknoloji tags ukunyanga ubushushu, Ukunyanga ubushushu, inkonzo yokunyanga ubushushu, unyango lobushushu, unyango lokushushubeza, Ukunyanga ubushushu be-HF, Ukunyanga kwamaqondo aphezulu ubushushu, unyango ubushushu rhoqo, ukunyusa ukutshatyalaliswa kobushushu, Inkqubo yokunyanga ubushushu, Ukunyanga ubushushu bomphezulu, unyango lokufudumeza umphezulu
I-Induction Hardening Inkqubo yokufaka isicelo Yintoni le nto yokuqaqadeka kwe-induction? Ukuqiniswa kwe-induction luhlobo lonyango lobushushu apho icandelo lesinyithi elinomxholo wekhabhoni owaneleyo lifudunyezwa kwicandelo lokungeniswa emva koko laphola ngokukhawuleza. Oku kwonyusa kokubini ubunzima kunye nokuba krwada kwenxalenye. Ukufudumeza ngeniso kukuvumela ukuba ubenendawo yokufudumeza kwindawo… Funda ngokugqithisileyo
iindidi FAQ, Teknoloji tags thenga umatshini onzima wokungenisa, ukwenza lukhuni, ukuqina koqheliso, lukhuni, inkqubo umphezulu lukhuni, ukutyhutyiswa kokutshisa, umatshini wokuqinisa induction, induction Ukuqinisa ixabiso lomatshini, Ixabiso lokungenisa induction, Inkqubo yokwenza lukhuni, Induction yokuqinisa ubuso, Inkqubo yokwenza lukhuni, yintoni ukuqina kwe-induction